ပုပ္ပါးရောက်အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ပုပ္ပါးရောက်အမှတ်တရ
Posted by we R one on Dec 31, 2011 in Local Guides, Photography, Travel | 19 comments
Local Guides photography Travel
Merry Christmas and Happy New Year ပါ ရွာသူ ရွာသား အပေါင်းတို့ရယ်။ နှစ်သစ်မှာ သူကြီးနဲ တကွ ရွာသူ ရွာသား အပေါင်းတို့ ကိုယ့်၏ကျမ္မာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ မေတ္တာ ပို့ သလိုက်ပါတယ်..။
၂၅ ၇က်နေ့ ပုပ္ပါး ၊ ပု၈ံ ညောင်ဦး ကို ခ၇ီးသွားခဲ့၇ပါတယ်။ ကျွန်မ တို့ ဟ company ၇ဲ့ ၁ဝ နှစ်ကျော် ကာလ အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ဝန်ထမ်းတွေ ကို လိုက်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ည နေ ၇း၃ဝ က စပြီးကား ထွက်ပါတယ်…။ လမ်းမှာ ၁၁၅ မိုင်း၇ပ်လိုက် ၁၂၅ မိုင်၇ပ်လိုက်နဲ အိပ်ပျော်လာခဲ့တာ ၂၆ ၇က်နေ့ မနက် ၆ နာ၇ီထိုးခါနီး ပုပ္ပါးကိုေ၇ာက်တော့မှ နိုးတော့တယ်..။
ကားပေါ်က ဆင်းတော့ တိုက်တဲ့ လေ က အေးစိမ့်ပြီး လတ်ဆက်နေတာ.. ၇န်ကုန်မှာနေတာ ၁ဝ နှစ်ပါး၇ှိပြီ အဲလို လတ်ဆတ်တဲ့လေ မျိုး တစ်ခါမှ မ၇ဖူးဘူး..။ မနက်၆နာ၇ီ သာဆိုတယ် မှောင်မဲနေတုန်းမို့လို့ တောင်ကလပ်ပေါ်မတက်ခင်မှာ စားသောက်ဆိုင်ပေါ်မှာ ခနဝင်နားကြပါတယ်..။ နားနေ၇င်းတွေးမိတာ က ကျွန်မ တို့တောင်ကလမ်ပေါ်ေ၇ာက်မှ ကံဆိုးစွာနဲ မီးတောင် က ထပေါက်၇င်ဘယ်နယ်လုပ်မလဲလို့ပေါ့..။ ဝင်လာတဲ့ အတွေးကို စိတ်ထဲမှာ မထားပဲနဲ အပြင်ကို ထုတ်ပြောမိတော့ ဝိုင်း၇ီကြတယ်..။ မီးငြိမ်းတောင်ပါဆိုမှ ပေါက်မလားဟဲ့တဲ့..။ အဲဒါကို ကြားသွားတဲ့ ကျွန်မတို့၇ဲ့ MD က ဝင်ပြောပါတယ်..။တောင်ကလပ်က မီးတောင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. .။ မီးတောင်က လွင့်ထွက်လာတဲ့ မီးတောင် အဖုန်းပါတဲ့..။ ဆိုလိုချင်တာက မီးတောင်က ပေါက်ထွက်၇င်နဲ အဲးဒီနေ၇ာမှာ လျှော်၇ည်ကျောက်တုန်းတွေ စုပြီး တောင်ကလပ် ဖြစ်လာတာလို့ပြောချင်တာပါ.။မနက်၆ နာ၇ီ ၄၅ လောက်မှ တောင်ကလပ်ကို တက်နိုင်လောက်တဲ့ အလင်းေ၇ာင် ၇လာပြီ မို့ ကျွန်မတို့ တွေ တောင်ကလပ်ပေါ် ကို စတတ်ကြပါတယ်။
တောင်ကလပ်ပေါ်တက်ဖို့ လှေကား၇င်းကိုေ၇ာက်တယ် ဆို၇င်ပဲ ဘုးတွေမှာတွေ့၇တဲ့ အတိုင်းပဲ မယ်တော်ကြီး ကိုဆက်ကပ် ဖို့ ပန်းတွေ အတင်းလိုက်ေ၇ာင်းပါတယ်။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးေ၇ှ့ကို ဆက်ပြီးတက်လာလိုက်ပါတယ်.။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စ၇ာ တစ်ခု က ထပ်ပေါ်လာပါတယ်.. ။ ဘာဘိုတော် ၇ဲ့ ၇ုပ်ထုလည်း မသိဘူး အဲးဒီ အ၇င်ေ၇ှးခိုးပြီးမှ တောင်ပေါ် ကိုတက်၇တယ်တဲ့လေ အတင်းလော ခေါ်နေတယ်..။ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ မယ်တော် ကို ကန်တော့ဖို့ ခေါ်လိုက် ဘိုးတော် ကို ကန်တော့ဖို့ခေါ် လိုက်နဲ မကန်တော့ပဲ သွား၇င် တောင်ကလပ်ပေါ်က ပဲ ပြုတ်ကျ သေးမလိုလို အန္တာ၇ယ် တစ်ခုခု ပဲကြုံ ၇တော့မလိုနဲ လိုက်ပြောနေတဲ့ ပုံစံတွေက…။
အေ၇းထဲ မျောက်တွေက တမှောင်.. တော်တော် လူပါးဝတဲ့ မျောက်တွေ လို့ပြောလို့၇တယ်..။
မနက်ပိုင်းမို့လို့လား မသိဘူး လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း သန့်၇ှင်းေ၇း မလုပ်၇သေး လို့ မျောက်ချီးတွေ ကိုမနည်းေ၇ှာင်ပြီး သွားနေ၇တယ်..။
တောင်တက် လှေကားပေါ် က အစာစားနေတဲ့ မျောက်
တက်၇တာ နည်းနည်း ပင်ပန်း ပေမဲ့ တောင်စောင်းတလျှောက် တိုက်လိုက်တဲ့ လေအေးအေး ကြောင့် နေလို့ထိုင်လို့တော့ အကောင်းသား။
မျောက်တွေ ကိုေ၇ှာင်၇င်း အတင်း ကန်တော့ခိုင်းတဲ့ လူတွေကို စိတ်တိုတို နဲ ပွစိပွစိ လုပ်၇င် တောင်ပေါ် ကိုေ၇ာက်လာပါတော့တယ်..။ ဘု၇ားကို ကန်တော့ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ ပုပ္ပါး အလှ ကိုခံစား ၇င်း အမှတ်တ၇ ဓါတ်ပုံတွေ၇ိုက်ကြတာပေါ့..။ သတိထားမိတာတော့ တောင်ပေါ်မှာ က တက်လမ်းတစ်လျှောက်လောက် လေမတိုက်ဘူး ဆိုတာပဲ.။ မိုးအုံ့နေတော့ နေကလည်း မထွက် မြူတွေ ကဆိုင်းပြီး တောင်ပေါ်ကနေ သဘဝ အလှအပတွေ ကို ကောင်းကောင်း မတွေ့၇ပါဘူး…။ ဒီလိုနဲ ပျော်၇ွင်ခြင်းတစ်ဝတ် စိတ်တိုးခြင်းတစ်ဝက်နဲ တောင်အောက် ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်..။ အတက်လမ်းတစ်လျှောက် အတင်းလိုက်ကန်တော့ ခိုင်းတဲ့ လူတွေေ၇ာ ၊ အတင်း မျောက်စာအတင်းလိုက်ေ၇ာင်းတဲ့ လူတွေေ၇ာ ပန်းတွေ အတင်းလိုက်ေ၇ာင်းတဲ့ သူတွေေ၇ာ လှည့်တောင် မကြည့်ကြတော့ ပါဘူး..။
တောင်ပေါ်မှာ ကောင့်ညှင်းပေါင်းစားနေတဲ့ မျောက်
တောင်ကလပ်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်နေ၇တဲ့ တောင်မကြီး..
တောင်ကလပ်ပေါ်က နေ လှမ်းမြင်၇တဲ့ တောင်အောက် ရှုခင်း
တောင်ကလပ်ပေါ်ကနေ လှမ်းမင်၇တဲ့ ဧ၇ာဝတီ မြစ်
တောင်အောက်ခြေ လှေကားပေါ်မှာေ၇ာင်းနေတဲ့ သစ်မြစ်သစ်ဥ သစ်ဖုတွေ ပါ..
တောင်အောက် က လှမ်းမြင်၇တဲ့ တောင်ကလပ်
ပုပ္ပါးမှာ တစ်ခု သတိထားမိတာ က ဘုရား ထက် နတ်ကွန်းတွေ ပိုများနေသလားလို့ပါ.။
ပုပ္ပါး ကနေ ပြီးတော့ ဗျတ္တ ပန်းဆက်လမ်းကနေပြီးတော့ ပုဂံ ကို ခ၇ီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်..။ ပုပ္ပါး ကနေ ပုဂံတစ်လျှောက်မှာ လမ်းဘေး ဝဲယာ ကို ငေးပြီး အတွေးတစ်ခု ဝင်လာတာ က ဗျတ္တ က လူ မယ်ဝဏ္ဏ က ဘီလူး ဘယ်လိုက ဘယ်လို ညားကြ ပြီးကလေး မွေးကြတယ် မသိဘူး..။ လူမဟုတ်ပဲ နဲ နာနာ ဘာဝ တွေနဲလည်း ကလေး ယူလို့၇သလားလို့..ပါ..။ စိတ်မ၇ှင်းလို့ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ သူက ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတော့ တကယ်တော့ မယ်ဝဏ္ဏ က လူပါတဲ့..ပုပ္ပါးတော့ ထဲမှာလာပြီး ပုပ္ပါးတောင်မှာ သာသနာပြုဖို့အတွက် တရားအားထုတ်နေတာတဲ့. တခြား လူတွေ က မယ်ဝဏ္ဏ ကို တွေ့၇င် ဘီလူ၇ုပ်ပဲ မြင်၇တာတဲ မယ်ဝဏ္ဏ ၇ဲ့ အားထုတ်ထားတဲ့ တခိုးတော် ကြောင့်တဲ့ အဲဒီ အချိန်မှာ ဗျတ္တ က အနော်ရထာ မိဘု၇ား ပန်းဆက်ဖို့အတွက် ပန်းလာခူ၇င်း နဲ မယ်ဝဏ္ဏနဲ တွေ့တာတဲ့..။ ဗျတ္တက ဇော်၈ျီဖိုဝင် သားကို စားထားတဲ့ အတွက် ဘီလူမ လို့မမြင်ပဲ လူလို့ပဲ မြင်၇ာကနေ ချစ်သွားကြတာတဲ့..။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကျွန်မ တွေးမိတာ က ပု၈ံပြည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားနေပြီးလား..? နောက်တစ်ခု က ဗျတ္တ က မနက်တိုင်း ပု၈ံကို ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းကနေ သွား၇တယ် ဆိုတော့ ကားနဲ သွား၇င်တောင် ၂ နာ၇ီကျော်လောက် ကြာတဲ့ ခ၇ီး ကို ဗျတ္တဘယ်လိုများ သွားသလဲ ဆိုတာကို တွေး၇င်း နဲ ပြန်အိပ်ပျော် သွာလိုက် တာ ပု၈ံ ကိုေ၇ာက်တော့ နိုးတော့ တယ်..
အယ် ကိုပေနဲ့ကိုပေါက်ဖော် ဗျ
တောက်ညင်းပေါင်း စားနေတာ ဘယ်သူလေးလဲဂျာ့
မဆူးတို့ သားအမိလည်းပါတယ် ဂျာ့
ပုပ္ပါးအမှတ်တရဆို ဖိနပ်ပျောက်ဖူးတယ် ၈ တန်းနှစ်က သွားတာ အလှူငွေထည့်တုန်း ဘယ်သူသမသွားမှန်း
ပုပ္ပါးကနေ ပုဂံဆက်မသွားဘူးလား ဟင်။
ပုပ္ပါးမှာ ဆူး ရဲ့ ကင်မရာကို လုပြီး ထွက်ပြေးတဲ့ ဖရဲသီး လိုက်ရိုက်တာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူ့ အမေ ရင်ခွင်ထဲ ပြေးပုန်းနေတယ် ကြည့်ပါလား.. ရုပ်ကိုက ဘုမသိ ဘမသိ လုပ်ပြနေတာ ကင်မရာ လုပြီး ထွက်ပြေးတုန်းက ဒီရုပ်လား.. လိုက်ရိုက်မှ အသနားခံနေတာ.. ဒီဖရဲသီးတော့ ၄စိတ်ခွဲပြီး အစိထုတ်ပြီး အရည်ညှစ်ခံရတော့မယ်။
မပေနဲ့မဖွတ်ကျားကွဲ့ 
မပေက ခလေးနို့ တိုက်နေတယ်
မဖွတ်က အပေါ်ဆုံးမှာ ငုတ်တုတ်
ဘောင်းဘီလဲ မ၀တ်ကျဘူး..တယ်လဲ အရှက်ကင်းကြတာပဲ
supercustom လဲ lincene ချပေးနေတယ်တဲ့…အဲ.တုန်းက
မြင်က ကားထက်မြန်ပ့ါမလား နော်.. အော် နောက်တစ်ခု သူတို့ က ဇော်ဂျီဖိုဝင်သား ကိုစားထားတာဆိုတော့ အစွမ်း၇ှိတယ်တဲ့.. မနက်က အဆောင် က အန်တီကြီးပြောတာ.. ဒီခေတ်မှာများ အဲဒီ ဇော်၈ျီဖိုဝင်သားတွေ လိုက်၇ှာသင့်တယ်နော်.. လူတိုင်း ကောင်းကင်ကနေ ပျံသွားလို့၇တော့ လမ်းစ၇ိတ်လည်းသက်သာ ကားတွေလည်း စီစ၇ာမလိုတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လည်းလျှော့ချ ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့..။ ကဲ့ ၇ွာသူ၇ွာသားတွေ စိတ်မဝင် စားကြဘူးလား ဇော်ဂျီဖိုဝင် သား ကို..
တောင်မကြီးကပိုသာယာတယ် တောင်တက်ရင်ဂိုဒ်ကိုခေါ်ရတယ် သူတော်စင်တွေတရားကျင့်တဲ့ ဂူတွေပါရှိတယ် တောင်မကြီးထိပ်အထိတက်ဘူးတယ် ၂နာရီခရီးပဲ
ရှုခင်းပုံတွေ ရော..မျောက် ပုံလေးတွေ ရော…တော်တော် ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုပါပဲ.။
နောက်ကိုလည်း ဒါမျိုး ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးပါဦးဗျ။
မျောက်တွေက အနား အကပ်မခံကြနဲ့နော် .. မထင်ရင် မထင်သလို ကိုက်သွားတတ်သလို အစာမြင်ရင်လည်း အတင်းလုတတ်ကြတယ်။ အတော်ဆိုးတယ် ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းလည်း သတိထား။ မထင်ရင်လုသွားတတ်သေးတယ်။
ကြည့်ရတာ အလယ်ပိုင်းခရိုင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေး စီမံကိန်းက တကယ်အောင်မြင်ပုံရတယ် …
အပင်တွေ များပြီး စိမ်းညှို့နေတာပဲ………
ဖိုဝင်သားစားထားလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတောင် ဇောက်ထိုးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိသူမို့ အဲ့ဒီခရီးကို တခဏချင်းနှင်နိုင်တာလို့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေတော့ တင်ခဲ့တာပဲ……
အောက်ဆုံးက စ ရင် ဒုတိယ မြောက် ပုံမှာ လေ .. ဗန်းထဲက သစ်မြစ်၊ သစ်ဖု ဆိုတဲ့ ထဲမှာလေ .. လိမ္မော်ရောင် သစ်မြစ် တွေ က ဘာလဲ ဟင် ၊ ဘယ်လို ခေါ်လဲ … :-)
မပြောတတ်ဘူး အဲဒါ တွေ က ဆေးဖက်ဝင် တယ်လို့ပဲေ၇ာင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးက ပြောတယ်.. မဝယ်ပဲနဲလာမေးနေလို့ သိပ်မကြည်ဘူး ..
ညက ရှမ်းဆန်အရက်တွေ သောက်တာများပြီး
ရင်တွေ ပူနေတယ် ဝရုန်းလေး ရေ
ရင်ပူလာ၇င် ဘီယာဆိုင်းနာ သွားစို့လား ကိုမောင်ပေ ၇ဲ့ တ၈ျင်း၇ှိတယ်လေ..
ဆရာလေး က လိုက် ဒကာခံ မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်
ဆ၇ာလေးနဲ ဘီယာဆိုင်နဲ မသင့်တော်ပါဘူး.. ဒါကြောင့် တခြား၇ွာသားတွေ ကိုသာ တိုက်ခိုက်လိုက်တော့နော်.. တာ့တာ
အရင်က မြင်းခြံဦးဘသောင်းဆိုခဲ့တဲ့ တောင်တော်ပုပ္ပါးသီချင်းထဲက စာသားတွေသွားသတိရမိပါတယ်။
(နဂါးလိမ်ချော်ဆစ်က စကားတောင်တော်ပန်းယနံ့လှိုင် လှမ်းဆွတ်ပါ့မေရယ်….
လှမ်းဆွတ်ပါ မေရယ် ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင်)တဲ့………………
1978 ကျနော်တစ်ခေါက်ရောက်တယ် အရမ်းသာယာပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်ရဲ့ နှမငယ် အကြောင်းကဗျာလေးကို သွားသတိရမိပါတယ်။ပုပ္ပားကို နှစ်ကြိမ်ရောက်ဖူးပေမယ့်